जान्नुहोस्, कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ? – NepalayaNews.com
जान्नुहोस्, कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ?
दसैँ नजिकिँदै छ । बजारमा ड्रेस किन्नेको भिडभाड बढ्दै छ । बजार घुम्दा डमीलाई लगाएका सोपिस सबै राम्रो भएजस्तो देखिन्छ र किन्न मन लाग्छ ।
फेसन डिजाइनर नवीना महर्जनले गोरो, कालो र गहुँगोरो वर्णका व्यक्तिले कस्तो रङको ड्रेस रोज्ने र कस्तो नरोज्ने भन्नेबारे टिप्स दिएकी छिन् :
कालो वर्णका व्यक्ति गोरो छाला भएका व्यक्तिको तुलनामा ड्रेसको रङबारे बढी नै सचेत हुनुपर्छ । कालो व्यक्तिले पहेँलो रङको ड्रेस नलगाउने भन्ने हुन्थ्यो, तर अहिले फेसनमा पहेँलो पनि चलेको छ । तर, पहेँलोमा सेलेक्टेड मात्रै सुहाउँछ । लेमन एलो (कागती रङको) सुहाउँछ भने हाइलाइट एलो सुहाउँदैन ।
जुन रङ पनि सुहाउने गर्छ । एउटा मात्रै कुरामा सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो स्किनटोनसँग मिल्ने कलर गहुँगोरो व्यक्तिले प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ ।एजेन्सी
पुरुषको भाग्य चम्काउने युवतीमा हुन्छन् यस्ता लक्षण ?	१२ माघ २०७७, सोमबार १५:३५
अमेरिकामा ६१ वर्षीया महिलाले जन्माइन् आफ्नै छोराको वीर्यबाट नातिनी!	२० मंसिर २०७७, शनिबार १५:०१
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बाइडेनको ठूलो सफलता २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:०६
आखिर किन अमेरिकालाई फिटिक्कै मनपर्दैन साउदी अरबका युवराज सलमान ? २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:०६
मृगौला पिडित विकलाई अमेरिकाबाट ६ लाख सहयोग २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १५:०६